Okokugqibela iAlcatel Idol 4S nayo Windows 10 Iselfowuni ayizukufika eYurophu | Iindaba zeGajethi
Okokugqibela iAlcatel Idol 4S nayo Windows 10 Iselfowuni ayizukufika eYurophu
Okwangoku akukho baninzi abavelisi abaqhubeka nokubheja kwi Windows 10 Iqonga leselula, iqonga amaxesha amaninzi eliqwalaselwe njengelahliwe nguMicrosoft. Kodwa kude nokumshiya, Abafana baseRedmond bahlala befuna Windows 10 Iselfowuni ukuba ibe lukhetho kulawulo olukhulu lwe-Android kwintengiso. Ngenxa yoku, kuye kwanyanzeleka ukuba isebenzisane nabavelisi bezixhobo zethu, ezinje nge-HP kunye neAlcatel, ukumilisela ii-terminals kunye nenkqubo yazo kwintengiso. Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo besithetha nge-HP Elite X3, itheminali eyilelwe imeko yeshishini, isixhobo esijikeleza umsebenzi weContinuum.
I-Alcatel, inkampani yaseFrance ekhokele imarike yomnxeba kwi-90s yasemva kwexesha kunye noLuhlu olunye lokuChukumisa, iphehlelele isiphelo esitsha esiphela esilawulwa Windows 10 Iselfowuni, isiphelo sendlela esinganyanzelekanga ukuba sikhwebe nantoni na kukhuphiswano. IAlcaltel Idol 4S ilawulwa yi-Snapdragon 820 kunye ne-4 Gb ye-RAM. Inesikrini esine-intshi ezi-5,5, umfundi weminwe, uqhagamshelo lwe-USB-C kunye nenkxaso yeContinuum. Ikhamera yesi siginali yi-21 mpx ngasemva kunye ne-flash ephindwe kabini ye-LED ngelixa umphambili uyi-8 mpx. Ukuza kuthi ga ngoku yonke into igqibelele. Ixabiso: $ 480
Ingxaki ifunyenwe kukuba ngokweakhawunti esemthethweni yenkampani, esi sigxina siza kubona ukukhanya eMelika. Isizathu se Esi sigqibo kufuneka kuvunyelwene ngaso noMicrosoftKuba kungenjalo asifumananga sizathu sinokuthethelela eso sigqibo sithintela ukukhula kweqonga likaMicrosoft elihambayo, iqonga ngokwedatha yakutshanje, elingagqithi kwisabelo esi-1% kwihlabathi liphela. Kodwa njengamaxesha onke, nantoni na ehamba ngentloko yesahlulo seMicrosoft, kuphela abaqondayo, hayi abanye abasebenzisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Okokugqibela iAlcatel Idol 4S nayo Windows 10 Iselfowuni ayizukufika eYurophu